We Fight We Win. -- " More than Media ": မြေကြီးကိစ္စ မေ့လျှော့ပေါ့ဆ မလုပ်ကြနဲ့ လှုပ်တတ်တယ် ပြိုတတ်တယ် မျိုတတ်တယ် (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်)
မြေကြီးကိစ္စ မေ့လျှော့ပေါ့ဆ မလုပ်ကြနဲ့ လှုပ်တတ်တယ် ပြိုတတ်တယ် မျိုတတ်တယ် (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်)
ဟုတ်လိုက်တာဗျာ။ ကျုပ်ပြောချင်နေတာကလည်း တစ်ပြည်လုံးရဲ့မြေတွေ ယာတွေရဲ့ကိစ္စ၊ မြေတွေ ယာတွေပေါ်မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတဲ့ လယ်သမား ယာသမား၊ မြေလုပ်သားတွေရဲ့ ကိစ္စ၊ အဲဒီလုပ်သားထုကြီးရဲ့ ငွေကြေး အရင်းအနှီး မပြည့်စုံမှုကိစ္စ၊ ကြွေးမြီကိစ္စ၊ ချေးငွေကိစ္စ၊ စိုက်ထုတ်ရင်းနှီး သုံးစွဲနေရတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး စရိတ်ငွေကြေးတွေရဲ့ ကိစ္စ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံ ဈေးနှုန်းတွေရဲ့ ကိစ္စ။ အို . . . ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင်ပါပဲဗျာ။ စားရင်းတို့ရင် အပင်းဆို့သလို မော မော မော ဆိုတဲ စကားအတိုင်းပဲပေါ့။